‘म यस्तो गीत गाउँछु’ र ‘प्रेम गीत—२’ हेरिसकेपछि | Jukson
अहिले नेपाली सिने बजारमा दुई चलचित्रको खुब चर्चा छ । चलचित्र हो ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ र ‘प्रेम गीत—२’ । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ असार ३० गतेदेखि प्रदर्शन भएको थियो भने ‘प्रेम गीत—२’ साउन १३ गते बाट । अरु पनि नेपाली चलचित्र सिनेमा घरमा नचलेका होइनन् । तर यी दुई चलचित्रबीच कडा प्रतिष्पर्धा देखिन्छ । यी दुई चलचित्रलाई यो कारणले प्रतिष्पर्धी भन्न सकिन्छ कि पहिले बनेको ‘प्रेम गीत’ चलचित्र यूनिट टुटेर दुई समुहमा विभाजित भई एउटाले समुहले वर्ष २०७२ मा रिलिज भएको फिल्म ‘प्रेमगीत’ मा समावेश शिर्ष गीत सापटी लिएर निर्माण भएको फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ निर्माण ग¥यो भने अर्को समुहले ‘प्रेम गीत—२’ ।
शुक्रबारदेखि नै प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘प्रेमगीत २’ लाई रामशरण पाठकले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा प्रदिप खड्का, अश्लेशा ठकुरी, भुवन चन्द, राजाराम पौडेल लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको प्रेमगीतको छायांकन मुगु, लुम्बिनी, थाइल्याण्ड तथा म्यानमारमा गरिएको हो । चलचित्रमा एक नेपाली युवक र म्यानमारकी युवतीको प्रेमकथा समेटिएको छ ।
त्यस्तै वर्ष २०७२ मा रिलिज भएको फिल्म ‘प्रेमगीत’ मा समावेश शिर्ष गीत सापटी लिएर निर्माण भएको फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ लाई ‘प्रेमगीत’ फेम निर्देशक सुदर्शन थापाले निर्माण र निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा पल शाह, पूजा शर्मा, सरोज खनाल, रुपा राना, राजाराम पौडेल, मोहन निरौला, विक्रम सेन, अर्जुन गुरुङ लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
दुवै चलचित्र दर्शकहरुले हेरिसके र अड्कल पनि लगाइ सके होलान् कुन चलचित्र उत्कृष्ट छ ? मैले पनि दुवै चलचित्र हरिसकेकि हुनाले दुवै चलचित्रको समिक्षा गर्न मन लाग्यो । हुन त म कुनै विशेषज्ञ होइन् न त कुनै चलचित्र बुझेको मान्छे तर म स्पष्ट हेर्न सक्ने र स्वतन्त्र चलचित्रको कमीकमजोरी भन्न सक्ने दर्शक हुँ । मेरो नजरमा दुवै चलचित्र र तीनका कलाकार समान हुन । म दुवै चलचित्रको उत्तिकै फ्यान पनि । तर दुवै चलचित्र हेरिसकेपछि ‘प्रेमगीत २’ ले जति ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ ले प्रभाव पार्न सकेन । ‘प्रेम गीत—२’ को बारेमा सजिलै सबैले अड्कल लगाउन सक्थ्यो यस चलचित्रमा एक नेपाली युवक र म्यानमारकी युवतीको प्रेमकथा समेटिएको छ भनेर तर ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को बारेमा सबै सस्पेन्स नै थियो । प्रेम कथा बोल्ने भन्ने त थाहा थियो तर वास्तवमा कथा के थियो कसैले अड्कल लगाउन ग्राहो पथ्र्यो । तर जब दुवै चलचित्र हेरे ‘प्रेमगीत २’ मा जस्तो ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ रमाइलो भएन । सरसर्ती अरु दर्शहरुलाई हेर्दा पनि ‘प्रेमगीत २’ मा जस्तो ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ मा दर्शकहरु उत्साहित थिएनन् । ‘प्रेमगीत २’ हेर्दा दर्शकहरु पेट मिचिमिचि हाँरिहेका थिए भने हिरोहिरोनी रुदाँ दर्शक पनि रोइ रहेका थिए । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ नराम्रो भन्न खोजेको होइन् । राम्रो भए र त दर्शकहरु हलमा ओर्लिएका थिए । तर जुन आशा थियो ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बाट त्यो पूरा नभएको हो कि ? भन्ने लागेको छ । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ राम्रो छ तर अझै राम्रो हुन सक्थ्यो । चलचित्र प्रदर्शन अगाडी ‘प्रेमगीत २’ भन्दा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को जुन चर्चा थियो त्यो चर्चा फेरिएको छ ।
यदि चलचित्रको कमजोरी किटेरै भन्ने हो भने ‘प्रेमगीत’ मा जस्तो ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ मा पूजा शर्माको अभिनय दमदार छैन् । यो चोटी पूजा चुकेकी हुन् की भन्ने भान भयो चलचित्रमा पलको भूमिकालाई जोड दिएको छ तर पलको भूमिकालाई दमदार भन्न मिल्दैन । यो चोटी पूजा शर्माको ‘पापा’ को भूमिका निभाएका सरोज खनाल पनि खस्किएका छन् । चलचित्रमा पूजा यानि कि ‘छाया’ को स्मरणशक्ति हराउने कुरा आवश्यक थिएन भन्ने लाग्यो । पलको ‘भाग्गेमा नै लेखेको छैन भने मुटुमा सजाएर मात्रै कसैलाई आफ्नो बनाउन नसकिदोँ रहेछ’ भन्ने डाइलग बोहक अरु खासै मन छुने भनाई केही छैन । चलचित्रमा त्यति धेरै हसाउँने कुरा समेटिएको छैन भने खासै दर्शकलाई रुवाउन पनि सकने । तर गीतहरुको कुरा गर्ने हो भने ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ नम्बर वान मै पर्छ । चलचित्रको कथा त्यति घत लाग्ने चाँहि छैन । चलचित्र राम्रो छ तर अझै राम्रो हुन सक्थ्यो ।
अब ‘प्रेम गीत—२’ को कुरा गरौँ । चलचित्रमा कमेडि, रोमान्स, इमोसन, ट्रेजडी, याक्सन सबै कुरा समेटिएको छ । लाग्छ मरमसाला सबै कुरा मिलेको स्वाष्दिट । चलचित्रमा प्रेम यानि कि प्रदिप खड्काको अभिनय उत्कृष्ट छ । ‘प्रेमगीत’ मा जस्तो अभिनय थियो त्यो भन्दा पनि उत्कृष्ट छ प्रदिपको अभिनय ‘प्रेम गीत—२’ मा पनि । उनले धेरै मिहिनेत गरेको पनि चलचित्रमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । नवनायिक अश्लेसा ठकुरीले नयाँ भए पनि कुनै कमी हुन दिएकि छैनन् । एउटा शालिन अनि अलिअलि चञ्चले स्वभाव कि युवतीको भूमिकामा देखिएकि अश्लेसाले गीतको रोलमा पुरै न्याय गरेकि छिन् । यो सत्य हो कुनै डाइलगमा समस्या देखिन्छ तर कुनै कमजोरी छैन् । उ नयाँ भएर पनि राम्रो अभिनय गरेकि छिन् । उसमा खोट लगाउने कुनै ठाउँ छैन् । उसने बारम्बार ‘ए बजु’ भन्ने थेगोले पनि उनको अभिनयमा मसाला थपेको छ । चलचित्रमा प्रदिपले दर्शकलाई हसाउँन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् भने रुवाउन पनि खप्पिस देखिन्छन् । चलचित्र हेरेर हलबाट बाहिरिने क्रममा एक जानले भनेको सुने— म रुने मान्छे त होइन्, अहिले सम्म कत्ति फिल्म हरियो कहिले आँखा रसाएनन् तर ‘प्रेम गीत—२’ हेर्दा आँशु नै झ¥यो । यो भनाई चलचित्र हेरेर बाहिरिने क्रममा एउटा दर्शकको थियो । गीतहरु पनि राम्रै छन् । चलचित्रको महत्वपूर्ण एकदम सुन्दर दृष्य भनेको गीत म्यानमार फर्किने समयमा, प्रेमलाई कुरिरहेकि हुन्छे, मिस गरिरहेकि हुन्छे तर प्रेम भने उसको लागि फुल लिन गएको मान्छे लिफ्टमा अड्किएर आउन पाउँदैन । गीत भने प्रेम आउने आशमा एयरपोर्टसम्मै उसको बाटो हेर्दै जान्छे, उता लिफ्टमा बन्द प्रेम गीतलाई भेट्न नपाँउदा लिफ्टमै रुन थाल्छ । उसको रुवाइने धेरै दर्शकको आँखामा आँसु ल्याउन सफल भयो । मायाको लागि प्रेमको त्याग चलचित्रको महत्वपूर्ण विषय हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त चलचित्रमा देशप्रेमलाई पनि झल्काइएको छ । आफ्नो मातृभूमिको माया, गोरखालीले गरेको त्यागलाई उत्कृष्ट रुपले प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस माथि गीतको देशप्रतिको माया, आदर अनि लुम्बिनी जाँदा बुद्ध हाम्रै नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्दै नाचेको अति नै प्रिय छ । चलचित्रले नेपालका पर्यटकिय ठाउँहरुको प्रचार गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पु¥याएको छ ।
दुवै चलचित्रको एउटा साझा पाटो भनेको दुवै चलचित्रमा नायकको भूमिकालाई महत्वपूर्ण बनाइएको छ । तर प्रदिपको अगाडी पल शाह धेरै कमजोर देखिन्छन् । यो सकिक्षा कुनै पक्ष वा विपक्षमा गरिएकोे होइन् । दुवै चलचित्र राम्रो छ तर ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ भन्दा ‘प्रेम गीत—२’ उत्कृष्ट छ । यो किन लेखेका भन्दा पनि पूजा र पलको धेरै फ्यान होला जसले ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बाट धेरै आशा गरेका थिए तर त्यो पूरा भएन । सबै फ्यानको एउटा चाहाना हुन्छ आफ्नो मन पर्ने कलाकार सधैँ उत्कष्ट रहोस् र उसले अभिनय गरेको चलचित्र पनि सफल होस् । अझै उत्कष्ट गर्दै जाओस् भन्ने त्यसको पूजा र पललाई शुभकामना । यो एउटा विचार मात्र हो यदि कसैलाई असर गरेको खण्डमा माफी चाहान्छु ।
पोखरामा आरड्युनो रोबोर्ट्सको प्रदर्शनी
आन्दोलनले कालीगण्डकी लोकमार्गको काम ठप्प
फिफा उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयन सार्बजनिक : नेइमार मनोनयन मै परेनन्
प्रमुख ३ दलबाट १८ जना महिला उम्मेदवार, जित्नेमा ढुक्क